Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Grenada na -agbasa » Grenada Underwater Sculpture Park emechala ndozigharị
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Grenada na -agbasa • News • ndị mmadụ • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Grenada Underwater Sculpture Park emechala ndozigharị.
Nrụnye ahụ gụnyere ihe ọkpụkpụ dị ndụ 82 na-egosipụta omenala Grenada ma bụrụ nke a na-esi na mgbasa ozi dị iche iche eme ya mana ọ kachasị site na ntinye dị mfe gụnyere kọmpat. Ha na-emepụta mkpụrụ dị mma, nke dịtụghị aka ma na-adịgide adịgide, nke ndụ mmiri nwere ike ịmalite.
Emeghere ogige ihe ọkpụkpụ nke Grenada n'okpuru mmiri na 2006 ma bụrụ nke mbụ n'ụdị ya n'ụwa.
Ọkpụkpụ Britain bụ Jason deCaires Taylor lere anya ogige ahụ ma ndị snorkelers na ndị na-egwu mmiri na-enweta ya.
Ogige ihe ọkpụkpụ nke Grenada Underwater bụ akụ nke mba yana nlekọta ya dị mkpa maka idokwa anya nke ọma nke mmiri Grenada.
Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya Grenada (GTA) kwupụtara taa na ọrụ ndozigharị maka ụlọ ọrụ ahụ Ogige ihe ọkpụkpụ nke Grenada Underwater (USP), nke dị na ụsọ ọdịda anyanwụ nke Grenada na Mpaghara Nchekwa mmiri nke Molinere Beauséjour, emechaala.
N'ịbụ onye National Geographic kwupụtara dị ka otu n'ime ihe ịtụnanya 25 kachasị elu nke ụwa, onye na-ese ihe nkiri Britain bụ Jason deCaires Taylor chere ogige ahụ ma nwee ike ịnweta ma ndị snorkelers na ndị dị iche iche. Nke Ogige ihe ọkpụkpụ nke Grenada Underwater E mepere na 2006 ma bụrụ nke mbụ n'ụdị ya n'ụwa. Ọ bụrụla otu n'ime ebe nkiri kacha hụ n'anya.
Nrụnye ahụ gụnyere ihe ọkpụkpụ dị ndụ 82 na-egosipụta GrenadOmenala a ma bụrụ nke emebere ya site na usoro mgbasa ozi dị iche iche mana ọ kachasị site na mkpụrụ dị mfe gụnyere kọmpụta. Ha na-emepụta mkpụrụ dị mma, nke dịtụghị aka ma na-adịgide adịgide, nke ndụ mmiri nwere ike ịmalite.
Otu n'ime ihe osise ama ama ama n'ogige ahụ bụ Vicissitudes, okirikiri nke ihe osise 28 ewepụtara site n'aka ụmụaka Grenadian obodo jikọtara site na ijide aka. Mpempe akwụkwọ ndị ọzọ a ma ama gụnyere “Onye na-edekọ akụkọ efu,” nwoke na-arụ ọrụ n'ụdị typewriter na tebụl nke e ji mkpi akwụkwọ akụkọ kpuchiri; "Sienna," ihe ọkpụkpụ mara mma nke na-egosipụta ọmarịcha ọdịdị nke nwa okorobịa na-agba agba site na akụkọ obodo a hụrụ n'anya nke ukwuu; na “TAMCC Ihu,” usoro ụdị ihu ndụ yiri ka a kpụziri n'ime oghere nke nnukwu nkume coral nke metụtara ụmụ akwụkwọ kọleji obodo.
Ka oge na-aga, ndị agha gburugburu ebe obibi emetụtala ogige ihe ọkpụkpụ. Ya mere, iji chekwaa iguzosi ike n'ezi ihe ya, a malitere mbọ mweghachi iji nọgide na-adị mma gburugburu ebe obibi na ntinye aka na nnukwu ndụ mmiri ọ na-eweta. Mgbalị ndị a dịgasị iche site n'ịrụzi na ihicha ihe owuwu dị iche iche ruo n'iwepụ na ịkwaga ndị ọzọ.
"The Ogige ihe ọkpụkpụ nke Grenada Underwater bụ akụ nke mba na nlekọta ya dị mkpa maka idobe ihe ịchọ mma dị ọcha Grenada'mmiri," Petra Roach, CEO, Grenada Tourism Authority kwuru. N'ịbụ nke e mere ka ọ rụọ ọrụ dị ka ihe ọkụkụ na-emepụta ihe, ogige ahụ adọtala ọtụtụ ndụ mmiri dị iche iche na mpaghara ebe ọ bụ na e wụnye ya ma nye elu maka coral na-eto eto - nke dị mkpa n'ikpeazụ na mgbalị nchekwa anyị na-aga n'ihu na ntinye aka iji luso ya agha. mbibi nke okpomoku zuru ụwa ọnụ. Anyị na ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya Grenada ga-aga n'ihu na-akwado ma na-akwado ọrụ ndị dị otú ahụ iji hụ na ebe a na-aga aga na mbọ ga-adigide.